Ware “Awurade Mu Nko Ara”​—Ɛda So Ara Yɛ Adwuma Nnɛ? | Adesua
‘Wei Ne Ɔkwan a Ɛsɔ W’ani’
‘Wobɛkɔ So Awɛn’ Anaa?
Sua Biribi Fi Dwetikɛse Ho Mfatoho no Mu
Momma Yɛmfa Nokwaredi Mmoa Kristo Nuanom
Ware “Awurade Mu Nko Ara”​—Ɛda So Ara Yɛ Adwuma Nnɛ?
KENKAN WƆ Afrikaans Cakchiquel (Central) Cambodian Dangme English Ewe French Ga Garifuna Greenlandic Hmong (White) Italian Kimbundu Kwangali Kwanyama Lingala Maltese Mam Mazatec (Huautla) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nyaneka Nzema Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Sepedi Sesotho (Lesotho) Spanish Swati Tahitian Tlapanec Totonac Tsonga Tswana Twi Umbundu Venda Xhosa Zulu
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | March 2015
Ware “Awurade Mu Nko Ara”—Ɛda So Ara Yɛ Adwuma Nnɛ?
“Mennya obi nware no wɔ asafo no mu, na mesuro sɛ menyin a, mɛyɛ ankonam.”
“Mmarima bi a wɔnni asafo no mu yam ye, wɔwɔ ɔdɔ, na wɔdwene nnipa ho. Wɔnsɔre ntia me som, na wohwɛ a, wɔn ho yɛ anika sen anuanom mmarima binom.”
Onyankopɔn asomfo bi a wɔnwaree akeka nsɛm a ɛte saa ara. Wɔnim sɛ Yehowa pɛ sɛ n’asomfo ware “Awurade mu nko ara.” Ɛkyerɛ sɛ, nokware Kristofo nko ara na ɛsɛ sɛ yɛware wɔn. (1 Korintofoɔ 7:39) Adɛn nti na Kristofo binom keka nsɛm a ɛte saa?
NEA ENTI A EBINOM ADWENEM YƐ WƆN NÃÃ
Ebia Kristofo a wɔkeka nsɛm a ɛte saa susuw sɛ anuanom mmaa a wɔnwaree dɔɔso sen anuanom mmarima a wɔnwaree. Ɛte saa wɔ aman pii mu. Ɛho nhwɛso ni: Wokɔ Korea a, Kristofo mmaa a wɔnwaree dodow yɛ ɔha mu 57, na mmarima a wɔnwaree nso dodow yɛ ɔha mu 43. Wokɔ Colombia nso a, Kristofo mmaa a wɔwɔ hɔ dodow yɛ ɔha mu 66, ɛnna mmarima no dodow yɛ ɔha mu 34.
Wɔ mmeae bi nso, ebia sɛ awofo a wɔnyɛ Yehowa Adansefo de wɔn mma rema aware a, wɔgye ɔbarima no sika pii anaa akyɛde akɛse ansa na wɔapene so. Na ebia ɛbɛyɛ den sɛ anuanom mmarima a wɔnwaree binom bɛnya akyɛde a ɛte saa. Wei de adwendwene abɛto anuanom mmaa bi so; wɔntumi nhu sɛ wɔbɛnya Kristoni barima bi aware no anaa. *—Hwɛ ase hɔ asɛm no.
YEHOWA MU AHOTOSO HO HIA
Sɛ woanya adwene a ɛte saa pɛn a, wobɛtumi anya awerɛhyem sɛ Yehowa te w’asɛm no ase, na ɔnim sɛnea wote nka no ankasa.—2 Berɛsosɛm 6:29, 30.
Nanso, Bible mu deɛ, Yehowa hyɛ yɛn sɛ yɛnware Awurade mu nko ara. Adɛn ntia? Efisɛ ɔno na ɔnim nea ɛyɛ ma yɛn, na ɔpɛ sɛ ɔbɔ yɛn ho ban. Ɔmpɛ sɛ yɛsisi gyinae a ɛnyɛ papa a ɛbɛtumi apira yɛn anaasɛ ɛbɛma yɛadi awerɛhow. Nehemia bere so no, Yudafo pii warewaree mmaa a wɔnsom Onyankopɔn. Enti, Nehemia kaa nhwɛso bɔne a Solomon yɛe no ho asɛm. Bible ka sɛ: “Ne Nyankopɔn dɔɔ no, ma enti Onyankopɔn de no sii Israel nyinaa so hene. Ɔno mpo, mmaa ananafoɔ na wɔmaa no yɛɛ bɔne.” (Nehemia 13:23-26) Yehowa nim sɛ ne nkaesɛm yɛ papa, na ɛno nti na waka sɛ ɛsɛ sɛ Kristofo ware Awurade mu nko ara no. (Dwom 19:7-10; Yesaia 48:17, 18) Yɛda Yehowa ase sɛ ɔdɔ a ɔdɔ yɛn nti, wama yɛn afotu a yɛbɛtumi de yɛn ho ato so. Sɛ yɛtie Yehowa sɛ yɛn Sodifo a, yɛgye tom sɛ ɔwɔ hokwan sɛ ɔkyerɛ yɛn nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ.—Mmebusɛm 1:5.
Ɛda adi pefee sɛ wompɛ sɛ wo ne wɔn a ‘wɔnnye nni twe kɔndua korɔ,’ kyerɛ sɛ, wompɛ sɛ woware obi a ɔnnɔ Yehowa. Sɛ woware obi a ɔte saa a, ɔbɛtumi ama woagyae Onyankopɔn som. (2 Korintofoɔ 6:14) Onyankopɔn afotu yɛ papa bere nyinaa, na ɛnnɛ Kristofo pii asi gyinae pa sɛ wɔbɛtie Yehowa. Nanso, afoforo asi gyinae foforo koraa.
ƐDA SO ARA YƐ ADWUMA
Onuawa bi a ɔwɔ Australia a ne din de Maggy fii ase ne ɔbarima bi a ɔnyɛ nokware Kristoni nantewee. * (Hwɛ ase hɔ asɛm no.) Onuawa no ka sɛ: “Ná metaa toto adesua mu sɛnea ɛbɛyɛ a mɛtumi ne no abɔ yiye. Ɛmaa me ne Yehowa ntam yɛɛ basaa.” Ababaa foforo wɔ India a wɔfrɛ no Ratana. Ɔne aberante bi a ɔne no kɔ sukuu fii ase nantewee. Ná aberante no afi ase ne anuanom resua Bible. Nanso, Ratana nti na na ɔresua Bible no. Ewiee ase no, Ratana gyaee Yehowa som kɔɔ asɔre foforo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi aware aberante no.
Ndenguè a ofi Cameroon waree obi a ɔnsom Yehowa bere a na wadi mfe 19. Ansa na wɔreware no, ɔbarima no ka kyerɛɛ no sɛ ɔbɛma no kwan ma wasom Yehowa. Nanso wɔwaree akyi nnawɔtwe mmienu no, ɔbarima no ka kyerɛɛ no sɛ ɔremma ɔnkɔ asafo nhyiam. Onuawa no kaa sɛ: “Meyɛɛ ankonam, na daa na meresu. Mehuu sɛ m’asetena ayɛ basaa. Menuu me ho na medii awerɛhow bere nyinaa.”
Ɛyɛ nokware sɛ Kristofo binom aware wɔn a wɔnsom Yehowa, nanso wɔnyɛ wɔn basabasa na wɔma wɔn kwan ma wɔsom Yehowa. Nanso, sɛ wo kunu a ɔnsom Yehowa nyɛ wo basabasa mpo a, ɛbɛka abusuabɔ a wo ne Yehowa wɔ no sɛn? Sɛ wohu sɛ woantie Yehowa afotu a ɛbɛma w’ani agye a, akyiri yi, wobɛte nka sɛn? Nea ɛho hia sen biara no, Yehowa bɛbu nea woayɛ no sɛn?—Mmebusɛm 1:33.
Anuanom mmarima ne mmaa a wɔwɔ wiase nyinaa a wɔatie Yehowa afotu a ɛka sɛ yɛnware “Awurade mu nko ara” no gye di paa sɛ wɔasi gyinae a ɛyɛ sen biara. Anuanom mmarima ne mmaa a wɔnwaree asi wɔn bo sɛ wɔbɛware obi a ɔsom Yehowa ama Yehowa ani agye. Michiko a ofi Japan abusuafo ka kyerɛɛ no sɛ ɔnware obi a ɔnnɔ Yehowa, nanso na wasi ne bo sɛ ɔbɛtie Onyankopɔn. Sɛ ohu sɛ ne nnamfonom reware nokware Kristofo nanso ɔno deɛ ɔnyaa kunu a, na ɛhaw no. Ɔka sɛ: “Ná metaa ka sɛ esiane sɛ Yehowa yɛ ‘anigyeɛ Nyankopɔn’ nti, ɛnyɛ aware a yɛbɛware nko ara na ɛbɛma yɛn ani agye. Megye di nso sɛ ɔma yɛn nea yɛn koma pɛ. Enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛware na yɛnnya ɔhokafo a, ɛbɛyɛ papa sɛ yɛdi sigya kɔsi sɛ yɛbɛnya obi aware no.” (1 Timoteo 1:11) Akyiri yi, onuabarima bi a ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ asafo no mu waree Michiko, na n’ani agye sɛ ɔtiee Yehowa afotu.
Anuanom mmarima binom nso wɔ hɔ a wɔretwɛn sɛ wɔbɛnya obi a ɔfata aware no. Sɛ nhwɛso no, Bill a ofi Australia ka sɛ ɛtɔ mmere bi a mmaa a wɔnyɛ Adansefo kyerɛ ne ho anigye. Nanso, wamfa ne ho anhyehyɛ wɔn mu biara efisɛ na ɔmpɛ sɛ ɔne wɔn bɛbɔ na awiei koraa no, ɔne obi a ɔnnye nni ‘akɔtwe kɔndua korɔ.’ Bere rekɔ so no, ɔno nso kyerɛɛ anuanom mmaa bi ho anigye, nanso na mmaa no ani nnye ne ho. Bill twɛnee mfe 30 ansa na ɔrenya Kristoni baa bi a ɔne n’adwene hyia aware no. Ɔka sɛ: “Mennuu me ho. M’ani gye, efisɛ yɛbom kɔ asɛnka, yɛsua ade bom, na yɛn nyinaa bom som Yehowa. Sɛ me ne me yere nnamfonom hyia a, m’ani gye, efisɛ me ne wɔn nyinaa som Yehowa. Yɛde Bible na ɛsiesie yɛn aware mu nsɛm.”
BERE A WORETWƐN YEHOWA
Bere a woretwɛn sɛ Yehowa bɛboa wo ma woanya obi aware no no, dɛn na wobɛtumi ayɛ? Wobɛtumi asusuw nea enti a wonwaree no ho. Sɛ esiane sɛ wopɛ sɛ wotie Yehowa asɛm nti na wonwaree a, ɛnde nya awerɛhyem sɛ woama Yehowa ani agye. (1 Samuel 15:22; Mmebusɛm 27:11) Afei nso, bɔ Yehowa mpae daa, na ka wo komam asɛm kyerɛ no. (Dwom 62:8) Bere a worebɔ mmɔden ako atia sɔhwɛ ne akɔnnɔ bɔne no, wo ne Yehowa abusuabɔ mu bɛyɛ den da biara. Nya awerɛhyem sɛ Yehowa nim wo haw ne nea ɛda wo koma so nyinaa efisɛ wosom bo ma no. Ɔnhyɛɛ obiara bɔ sɛ ɔbɛma no kunu anaa ɔyere. Nanso, sɛ aware ne ade a wohia paa a, nya awerɛhyem sɛ Yehowa nim ɔkwampa a ɔbɛfa so ama woanya nea wo koma pɛ.—Dwom 145:16; Mateo 6:32.
Ɛtɔ mmere bi a wobɛte nka te sɛ Dawid a ɔkaa sɛ: “O Yehowa, yɛ ntɛm gye me so. Me honhom asa awie. Mfa w’anim nhunta me.” (Dwom 143:5-7, 10) Mpa abaw. Twɛn Yehowa ma ɔnkyerɛ wo nea ɔpɛ sɛ woyɛ. Kenkan Bible na dwennwen nea wokenkan no ho yiye; woyɛ saa na woretie Yehowa. Wei bɛboa wo ma woahu nea Yehowa pɛ sɛ woyɛ ne sɛnea waboa n’asomfo a wɔtenaa ase tete no. Sɛ wotie no a, wobɛnya ne mu ahotoso na woakɔ so adi n’asɛm so.
Kristofo a wɔnwaree som bo wɔ asafo no mu; wɔtaa boa mmusua ne mmofra
Dɛn bio na wobɛtumi ayɛ na ama w’ani akɔ so agye na woayere wo ho ayɛ ɔsom adwuma no bere a wonwaree no? Wobɛtumi ahyɛ wo ne Yehowa abusuabɔ mu den na woabɔ mmɔden anya din pa. Wobɛtumi nso asua ayamye, ayɛ adwumaden, adi Yehowa nokware, na woatew w’anim ama afoforo. Sɛ obi ani bɛgye wɔ n’aware mu a, ɛhia sɛ ɔnya saa su ahorow yi. (Genesis 24:16-21; Rut 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Mmebusɛm 31:10-27) Bɔ wo ho mmɔden wɔ asɛnka adwuma no mu, na yere wo ho wɔ asafo no mu. Sɛ woyɛ saa a, na worehwehwɛ Ahenni no kan. Wei bɛbɔ wo ho ban, na ɛbɛboa wo ma woasisi gyinae pa. Bill ka sɛ bere a ɔnwaree no, “Bere kɔɔ ntɛmntɛm! Mede saa bere no yɛɛ akwampae adwuma de som Yehowa.”
Yehowa ahyɛde a ɛka sɛ “Awurade mu nko ara” na yɛnware no bere ntwaam. Sɛ yɛware nokware Kristoni a, yɛhyɛ Yehowa anuonyam, na yɛn ani bɛgye. Bible ka sɛ: “Anigyeɛ ne onipa a ɔsuro Yehowa. Na ne mmara nsɛm da n’akoma soɔ. Ahonyadeɛ ne ade dodoɔ wɔ ne fie; ne tenenee wɔ hɔ daa.” (Dwom 112:1, 3) Enti si wo bo sɛ wobɛdi Onyankopɔn ahyɛde yi so: Ware “Awurade mu nko ara.”
^ nky. 7 Yɛbɛka asɛm yi afa mmaa ho. Nanso, ɛsan fa mmarima ho.
^ nky. 13 Wɔasesa edin ahorow no bi.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM March 2015